दाङमा दुई समूहबीच झडप, दुई जना घाइते – Pahilo Page
दाङमा दुई समूहबीच झडप, दुई जना घाइते
दाङमा बाम गठबन्धन र नेपाली काङ्ग्रेसका युवा बीच झडप भएको छ । क्षेत्र नं. ३ बाट प्रदेशसभा २ का उमेदवार एमाले नेता उत्तरकुमार वली र नेपाली काङ्ग्रेसबाट क्षेत्र नं. ३ का प्रतिनिधीसभाका उमेवार दीपक गिरी समर्थक युवाबीच तुलसीपुर १ भ्युडर सुनपुरमा बुधबार झडप भएको हो ।
आफ्ना सक्रिय सदस्य खड्क थापा सहितका युवालाई उत्तर वलीका समर्थकहरुले कुटपीट गरेको दीपक गिरीका पक्षले बताएका छन् । घाइते मध्य एकजनाको टाउकोमा गहिरो चोट लागेको तस्विर प्राप्त भएको छ । नेपाली काङ्ग्रेसका सक्रिय सदस्य खड्क थापा र सेवक ढकालको तुलसीपुरको सिटी अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ ।
उता वली पक्षकाले भने दीपक गिरीका समर्थकहरुले आक्रमण गर्दा लु १ ज ७३३९ नंं. को गाडीको सिसा फुटेको बताएका छन् । यता इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रमुख डिएसपी सुधिरराज शाहीले भने घटनाबारे जानकारी आए लगत्तै शसस्त्र प्रहरीको टोली पठाएको बताएका छन् । ‘डिटेलमा पछि भनौंला, सामान्य झगडा जस्तै भएको रहेछ,’ उनले भने ।।
प्रकाशित मिति : बुधवार, मंसिर २०, २०७४ समय : २१:३३:१८ 211 पटक पढिएको